Jose Mourinho Oo Ka Hadlay Guuldaradii Kooxdiisa Man United Ka Soo Gaadhay West Brom Ee Koobka Premier League U Gacan Galisay Man City Iyo Dareenkiisa Ku Guulaysiga Koobkan Ee Sky Blues. – GOOL24.NET
Jose Mourinho Oo Ka Hadlay Guuldaradii Kooxdiisa Man United Ka Soo Gaadhay West Brom Ee Koobka Premier League U Gacan Galisay Man City Iyo Dareenkiisa Ku Guulaysiga Koobkan Ee Sky Blues.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ka hadlay ku guuleysigii kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Manchester City ee koobka horyaalka Premier League, kadib guuldaradii 1-0 ahayd ee ay kooxdiisa Red Devils kala kulantay West Bromwich Albion.
Manchester United ayaa guuldaro xanuun badan garoonkeeda Old Trafford kagala kulantay kooxda West Brom ee kaalinta ugu hoosaysa kaga jirta miiska kala saraynta Premier league. Taasoo ka dhigtay in Sky Blues si rasmi ah ay u xaqiijiso in loo caleemo saaro koobka Premier League-ga.
Jose Mourinho ayaa kadib markii uu kulankii Old Trafford soo dhamaaday wuxuuna la hadlay saxaafada isaga oo qiray in kooxdiisu ay guuldarada u qalantay wuxuuna yidhi: “Si u qalanta ayaa la noo ciqaabay, laakiin natiijada waa mid aad u culus, waxaan ku guuleystay koobab, laakiin waan farxi lahaa hadii uu midkood sheego in kooxi ay ku guuleesatay koob, sababa la xidhiidha guuldarada koox kale”.
Mourinho oo eedayn u soo jeedinaya ciyaartoyda kooxdiisa ayaa yidhi: ” Wax walba uu adkaa, ciyaartoydu may doonayn ama si sahlan umay ciyaarin, wax walba uu hooseeyay, qof kastaaba hal ama in ka badan ayuu taabanayay kubbada”.
Mourinho ayaa u muuqday mid si wayn isku difaacaya wuxuuna sheegay in dad badani ay farxad wayn ka muujiyeen guushii ay Man City kaga soo gaadheen Etihad Stadium taas oo uu hoos u dhigay wuuxuna yidhi: “Anigu siddeed koob ayaan ku soo guulaystay isla markaana ma faraxsani, sababto ah in aan Manchester City ka soo guulaystay, kulan kaas oo saddex dhibcood ahaa, waxaan arkay dad badan oo ku faraxsan sababtoo ah in aanu Manchester City ka soo guulaysanay”.
Macalinka reer Portugal ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Manchester City waxay ku guuleysatay horyaalka, sababtoo ah waxay heleen dhibcaha ugu badan, laakiin ha ii sheegina in Manchester City ay ku guuleysatay horyaalka, sababtoo ah in Manchester United ay guuldareesatay”.
Mourinho ayaa hadalkiisa kusoo xidhay: “Waxaan ku kalsoonahay shaqadeyda, waxaan ku guuleystay sideed koob oo England ah, oo seddex ka mid ah ay yihiin horyaalka, waan ogahay sida aan u guuleysan karo, aniguna kalsooni ayaan ku qabaa, waxaan u baahanahay joogteyn heer walba, gaar ahaan heerka maskaxda”.
Manchester United ayaa kahor istaagtay dhigeeda Manchester City in ay ugu guuleysto koobka Premier League-ga garoonkeeda Etihad Stadium isbuucii lasoo dhaafay, kadib markii ay kaga guuleysatay 3-2, balse guuldaradii kasoo gaadhay West Brom ayaa ka dhigtay in Sky Blues ay si rasmi ah ugu guuleysato koobka Premier League-ga.